အောက်တိုဘာ 25 ရက်နေ့ဆို ကျနော်တို့ တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်ကြီး စတော့မှာပါ။ အခုချိန်လောက်ဆို တောင်ကြီးမြို့လေးမှာပဲ စည်ကားနေလောက်ပါပြီ။ ညပိုင်းဆိုလဲ အပျော်တမ်းလွှတ်တဲ့ မီးပုံပျံလေးတွေနဲ့ ကောင်းကင်မှာ အလင်းစက်ကလေးတွေ များနေလောက်ရောပေါ့။ ကျနော်တို့လို အဝေးရောက် မြို့သူ၊မြို့သားတွေအတွက်ကတော့ လွမ်းရပြန်ပြီ နောက်တနှစ်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူကိုယ်တိုင် မကဲနိုင်ပေမဲ့ ကျနော်တို့အားလုံး အဆင်ပြေအောင် အကုန်မပြည့်စုံပေမဲ့ အလွမ်းတွေအနဲငယ်ပြေပျောက်စေအောင် ရည်ရွယ်ပြီး တောင်ကြီးမြို့သူ၊မြို့သားများက အင်တာနက်ပေါ်ကနေပြီးတော့ Live လွှင့်တင်ပေးပါမယ်။ ဒီအတွက် အရမ်းကို ကျေနပ်အားရမိပါတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ကျနော်တို့ တောင်ပေါ်သားတွေအတွက် ဂုဏ်ယူရပါတယ်။
ဒီလို Live လွှင့်နိုင်ဖို့အတွက် များစွာသော အခက်အခဲတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီအခက်အခဲတွေကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး အဝေးရောက်လူတွေအတွက် ဖြစ်မြောက်အောင် စီစဉ်ပေးတဲ့ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ မှ တာဝန်ရှိသူများကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Studio 35 နဲ့တကွ ရှမ်းပြည်နယ်ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း၊ အင်တာနက်လိုင်းကို ချပေးတဲ့ လူကြီးဆိုသူတွေကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ (ပွဲမပြီးသေးလို့ ကျေးဇူးပါ အဟီး) ပြောလိုပါတယ်။ ကျနော်ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ၊ ဘလော့ညီအကို၊မောင်နှမများလဲ အပျင်းပြေဖြစ်စေ၊ မမြင်ဖူးတဲ့လူတွေဖြစ်စေ ဒီနေရာမှာ တူတူလာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စရာ တောင်ကြီးချယ်ရီမြေ ရဲ့ ဒီနေရာမှာ 25 ရက်နေ့က စပြီး ဆုံတွေ့ကြပါစို့လားဗျာ
*** ပုံကို တောင်ကြီးချယ်ရီမြေမှ ယူထားပါသည်။ ***
Posted by တောင်ပေါ်သား at 6:28 PM | Labels: All, ကျနော်မြို့လေး
အဟမ်းးးး မေသူ အရင်ဆုံးရောက်လာပါလားးးး
သွားပြီးးးးးး စီပုံးမှာသွားဆော့ဦးမယ် :D
ကိုတောင်ပေါ်ရေ ၂၅ ရက်နေ့ နော်။ ကြည့်အုံးမယ် :P
ရှမ်းပြည်ကို တခါမှ မရောက်ဘူးဘူး။ သူများတွေ ပြောနေတဲ့ တောင်ကြီး မီးပုံးပျံပွဲ ဆိုတာတော့ ကြားဘူးနေတယ်။ တနေ့နေ့တော့ သွားလည်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ် ကိုတောင်ပေါ်။
ခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ မရှိနေတော့ ကြည်ဖူးတယ် ရှိအောင် ကြည့်လိုက်ဦးမယ်
အဆင်ပြေလို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရောက်နေရင်လည်း သွားဖူးတယ်ရှိအောင် သွားဖို့ လုပ်ဦးမှ .. :D
လာမယ် လာမယ် တောင်ကြီးချယ်ရီမြေကိုပြောတာ... နှစ်တိုင်းစောင့်ကြည့်နေကြ... :)
တောင်ပေါ်သားရေ ကဗျာ ကြိုစပ်ထားလိုက်မယ်ကွာ
တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် က အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ် ရောက်ဖူးတယ် ဒါပေမယ့် ထပ်သွားချင်သေးတယ်
ကောင်ကြီးရေ...လာအားပေးပါ့မယ်။ တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်ကို လူကိုယ်တိုင် မရောက်ဖူးပေမယ့် ရုပ်မြင်သံကြားမှာတော့ နှစ်တိုင်းလိုလို စောင့်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ တကယ့်ကို အံ့မခမ်းပါပဲဗျာ။ တခါလောက်တော့ ရောက်ဖူးချင်တယ်။ ရှမ်းခေါက်ဆွဲလေးစားရင်း တဝကြီး ငေးကြည့်ချင်လို့။ မီးပုံးပျံကြီးတွေကိုပြောတာနော်။ ဆိုင်ရှင်ကောင်မလေးကို ပြောတာဟုတ်ဘူးရယ်။
အယ် ပျော်စရာကြီးနေမှာ တွားချင်တယ် ရိုက်ပို့ပေးမရား ရို့
လာကြည့်မယ်ဗျို့. တောင်းကြီးတော့ရောက်ဘူးတယ်. တန်ဆောင်တိုင်ပွဲ တစ်ခါမှမရောက်ဖူးလို့..။ တစ်ခေါက်တော့ ကြုံအောင်သွားမယ်ဗျာ.။
တခါတခေါက်တော့ အရောက်လာဦးမယ်ဗျာ တခါမှမရောက်ဖူးလို့..။
I had been Taungyi 8 years ago. It is beautiful city. I cannt forget that trip to Shan state. I went to Pintaya and Inlay. I love Shan State and Shan people. I want to visit Shan State again. May be I will go there next year when I visit Myanmar.
Anyway I like the songs you uploaded in your blog. I miss my mother these days....Cannt control myself not to cry.
မနှစ်ကလည်း စောင့်ကြည့်ဖြစ်တယ်.. အစီအစဉ်တင်ဆက်သူတွေကို ကျေးဇူးတင်တယ်
ဟဲ .. ခုမှ တရေးနိုး ထကြည့်ရတာ ..